Amathiphu ayi-7 we-Ecommerce Wokwenza Okuqukethwe Okuguqukayo | Martech Zone
Ngokwakha okuqukethwe abantu abakuthakazelayo futhi okusebenzayo, ungakhulisa ukubonakala kwesayithi lakho emiphumeleni yosesho lweGoogle. Ukwenza lokho kuzosiza ukukusethela ukuguqulwa okuthile. Kepha ukwenza abantu babheke izinto zakho akuqinisekisi ukuthi bathatha isinyathelo futhi bakunikeze ukuguqulwa. Landela lezi zeluleko eziyisikhombisa ze-ecommerce zokwenza okuqukethwe okuguqukayo.
Yazi Iklayenti Lakho
Ukwakha okuqukethwe okuguqukayo kuzodingeka ube nombono omuhle wokuthi iklayenti lakho linjani. Qala ngokuqoqa eminye imininingwane yabantu abavakashela ikhasi lakho, ababhalisele ama-imeyili akho, futhi bakulandele ezinkundleni zokuxhumana. Sebenzisa izibalo ukuthola imininingwane ngeminyaka yabo, ubulili, imfundo, kanye nemali engenayo.
-Google Analytics bangakunika imininingwane yokuthi bathakazelani lapho bengena ku-inthanethi. Ungasebenzisa futhi i-Twitter Analytics ne-Facebook Page Insights ukuthola ukuthi abalandeli bakho bezindaba zenhlalo banjani. Cela impendulo yamakhasimende ngomkhiqizo wakho, ukuthi ziyini izidingo zabo ezibaluleke kakhulu, nokuthi ungabasiza kanjani ezinkingeni zabo.
Lapho usuqoqe impendulo eyanele nedatha yabantu ungakha umthengi persona. I-persona yomthengi iyimodeli yeklayenti lakho elihle, echaza izingqinamba zabo, izisusa zabo, nemithombo yolwazi. UDanny Najera, umaketha wokuqukethwe e I-StateOfWriting.
Ukubizelwa Kwakho Esenzweni
Ngaphambi kokubhala lokho kubaluleke kakhulu I-CTA, kufanele unqume ukuthi ukuchaza kanjani ukuguqulwa. Yini izinhloso zakho zebhizinisi? Ngabe ufuna abantu basebenzise isaphulelo? Joyina uhlu lwakho lwe-imeyili? Faka umncintiswano?
Umkhiqizo noma insizakalo oyithengisayo izonquma i-CTA yakho. Lapho usuthole le nhloso, ubeke isisekelo secebo lakho lokumaketha. UClifton Griffis, umbhali wokuqukethwe ovela ku- Isilo esilula.
Lapho usuthole izithameli zakho eziqondiwe futhi wakhe umthengi, usulungele ukukhetha isihloko esifanele okuqukethwe kwakho. Enye indlela enhle yokuqhamuka nezihloko eziqinile ukuzibandakanya, noma okungenani ukucasha, emiphakathini eku-inthanethi ekhuluma ngezihloko ezihlobene nomkhiqizo wakho.
I-Facebook, i-LinkedIn, i-Google +, ne-Reddit zonke izindawo ezinhle ukuqala ukubheka. Sebenzisa umsebenzi wokusesha ukuthola imicu ekhuluma ngomkhiqizo owuthengisayo, bese ubona ukuthi abantu bakhuluma ngani. Ukuze uqiniseke ukuthi isihloko siyathandwa, cwaninga nje ngaso I-Ahrefs Keyword Explorer noma amathuluzi afanayo.
Inani Lebhizinisi lezihloko zakho
Kulungile ngakho-ke kungenzeka ukuthi uqoqe uhlu olude kakhulu lwemibono yesihloko, kepha ungakhathazeki, sesizonciphisa. Isikhathi sokunciphisa lolo hlu luye ezihlokweni ezisebenza kakhulu maqondana nenani lebhizinisi labo. I-CTA yakho kuzoba wukukhanya kwakho okuqondisayo kokunquma inani lebhizinisi elinesihloko.
Oda uhlu lwakho ngokususelwa ekutheni luhambisana kangakanani ne-CTA yakho, bese uthatha imibono ephezulu bese ulahla okusele. Ungakhohlwa ukuthi i-CTA yakho nokuqukethwe kufanele kube okulungile ngohlelo, ukufundwa kokuhlolwa, nokupholishwa ngokusebenzisa izinsiza ezinjenge UKUkubhalwa.
Ekugcineni yisikhathi sokwenza okunye okuqukethwe. Qala ngokwenza iGoogling ethile, ubone ukuthi hlobo luni lokuqukethwe oluza nesihloko osikhethile, bese uhlola ukuthi yiziphi izinhlobo zokuqukethwe ezisebenze kahle kakhulu. Izinhlelo ezinjenge I-Content Explorer kungakunika ukuqonda okuhle kokuthi yiziphi izindatshana esihlokweni sakho ezabiwe njalo, nokuthi kungani zazithandwa.
Khumbula ukuthi isihloko esiyinhloko siyingxenye enkulu yalokho okuletha ama-eyeballs ukubuka okuqukethwe kwakho, ngakho-ke ungenzi isihloko sakho sibe ngemuva. Xhuma kulezo zinhliziyo ezingokomzwelo ukuze ubhale okuqukethwe okucindezelayo.
Abantu benza izinqumo zokuthenga ngokuya ngokuthi bazizwa kanjani, hhayi lokho abakucabangayo. I-Essayroo futhi Bhala Iphepha Lami zombili ziyizibonelo ezinhle zokusebenzisa ngempumelelo ukuguqula okuqukethwe.
Ungabeka kuphi ucingo lwakho ezenzweni
Ukufaka ama-CTA akho kubalulekile, futhi yebo, lapho ubeka khona kubaluleke kakhulu maqondana nokuguqulwa kwakho. Isizathu sokuthi abantu bachofoze ezintweni ezifana nezixhumanisi zakho nama-CTA ukuthi bazithola zifanelekile. Ngakho-ke ungamane ubanamathele noma ikuphi, noma uzame futhi ujamuze abaningi ngangokunokwenzeka lelo akusilo isu elisebenzayo.
Funda okuqukethwe kwakho bese ungeza ku-CTA noma yikuphi lapho kubonakala kufanele khona kokuqukethwe okuxoxwayo. Uzama ukuqondisa abantu baye ezintweni zakho, hhayi ukubashaya ngaphezu kwekhanda ngakho. Ungasebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zama-CTA. Zifake ngqo embhalweni wakho, kuma-popups anezinhloso zokuphuma, nakuma-popbar scroll scroll.
Yazi Izinhloso Zakho bese Ukala Imiphumela
Yiba nomgomo, futhi uqiniseke ukuthi uyazi ukuthi uyichaza kanjani impumelelo, nokuthi imethrikhi yakho yempumelelo izoba yini. Ngeke wazi ukuthi isu lakho liphumelele kangakanani uma ungalinganisi imiphumela yakho. Thola ukuthi okuqukethwe kwakho kwabiwa kaningi kangakanani, bangaki abantu abakubonile, ukuthi ithrafikhi yakho ivelaphi, nokuthi wenza kahle kangakanani uma uqhathaniswa nabancintisana nabo.
Ukuthola ithrafikhi ethe xaxa kusayithi lakho le-ecommerce ngokuqukethwe okuhle kakhulu kuyisinyathelo sokuqala esikhulu. Kepha asilinganisi impumelelo ngokuya ngenani lezivakashi kuphela; ukuguqulwa kuyinjongo yangempela. Okuqukethwe okuhle kudinga ukuletha abantu futhi kubuye kuguqule ukuguqulwa. Landela lezi zeluleko eziyisikhombisa zokuhlangana ukuze ukwandise ukuguqulwa kwakho!
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweukuguqulwakuguqula okuqukethweezokuhweba ngekhompyuthaokuqukethwe kwe-ecommerce